समाचार - उत्खननकर्ताहरूको सबै भन्दा सामान्य सानो त्रुटिहरूको मर्मत
खुदाई गर्ने सबै भन्दा सामान्य सानो त्रुटिहरु को मर्मत! / खुदाई सुरु गर्न असफल हुन्छ, पहिले आफैँ मर्मत गर्ने प्रयास गर्नुहोस् वा सिधा सहयोगको लागि सोध्नुहोस्? / मास्टर गर्नुहोस्, अनावश्यक मर्मत लागतहरू हटाउँदै
केहि उत्खनन मर्मत र मर्मत कौशल मास्टर गर्न को लागी सीप हुनु पर्छ तपाई राम्रो उत्खनन चालक हुनु पर्छ। यस तरिकाले, तपाईं घबराउँनुहुनेछैन जब त्यहाँ सानो असफलता हुन्छ, र तपाईंलाई के गर्ने थाहा छैन, सिधै मर्मतकर्तालाई हेर्नको लागि भन्नुहोस्। समय र पैसा खर्च बढाउनको साथसाथै, यो अझै स्रोतहरूको अपव्यय हो।
उदाहरण को लागी, गियर तेल को प्रतिस्थापन, फिल्टर तत्व बाट हावा निकास, इत्यादि, केहि सरल विधिहरु मास्टर गरिएको छ, जसले हाम्रो कार्य दक्षता सुधार गर्न सक्छ र पनि उत्खनन सेवा जीवन विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ।
के मँ आज साझा गर्न चाहन्छु अक्सर समस्याको सामना गर्नुपर्दा अपरेटि exc एक्भभेटरहरू सुरू गर्न असमर्थ हुँदा। यदि यो सुरू हुन असफल भयो भने, यो इन्जिन आफैंमा समस्या हुनसक्दछ, उत्खननका चालकले समाधान गर्न नसक्ने कुरा हो।
तर यदि यो केहि समयको लागि सुरू गर्न सक्दैन, तपाईं सम्भावित कारणहरू आफैंमा जाँच्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ दुईवटा सम्भावित कारणहरू छन् जुन अस्थायी ईन्जिन सुरू गर्न सकिदैन: एक बिजुली अन छ? अर्को तेल छ?
तल समस्या निवारण विचारहरूको एक संक्षिप्त सूची हो:
१. त्यहाँ उत्खनन मोटर सुरु गर्न को लागी कुनै आवाज छैन, कि, पावर अन गरिएको छैन। खराब सम्पर्क वा बर्नआउटको लागि ब्याट्री जाँच गर्न सिफारिस गरिन्छ।
२. मोटर सुरु भएको छ, तर वेग ढिलो छ र ध्वनी सामान्य भन्दा फरक छ, जसले ब्याट्री पर्याप्त छैन भनेर संकेत गर्छ।
यदि तपाईं सक्नुहुन्छ भने, विद्युत उत्पादन निगरानी गर्नुहोस्। सामान्य अवस्थामा, तपाईले ब्याट्री बदल्नु पर्छ।
The. मोटर सुरु गर्नुहोस्, गति र ध्वनी सामान्य छ, तर ईन्जिन सुरू गर्न सक्दैन, तेल पुग्न नसक्ने संकेत गर्दै, पाइपलाइन सफा गर्न र त्यहाँ ब्लक छ कि छैन जाँच गर्न सिफारिस गरिन्छ।
सामान्यतया बिन्दुहरू जुन सजिलैसँग रोकिएको छ डिजेल ट्या tank्कको मुनि र ह्यान्डपम्पमा सानो स्ट्र्रेनरहरू छन्।
यो पनि सम्भव छ कि फिल्टर तत्व परिवर्तन भएको बेला हावालाई थालनी गरियो। यो निकास स्क्रू एक सानो र पम्प तेल एक हात तेल पम्प संग ढीला गर्न सिफारिस गरिएको छ।
The. उत्खननकर्ताको ड्राइभरले पनि विपरित समस्या सामना गर्न सक्दछ: ज्वालालाई बन्द गर्न सकिदैन र कुञ्जीलाई बाहिर तान्न सकिन्न।
यो सामान्यतया फ्लेमआउट केबल तानिएको छैनको कारणले भएको हो।
उत्खननको ईन्जिन कभर खोल्नुहोस् र आगो बन्द गर्नको लागि केबल हेडलाई धकेल्नुहोस्।
T. त्यहाँ एउटा केस पनि छ: बिहान वा इन्धनको तापक्रम कम हुँदा इन्जिन सजिलो हुन्छ, र पानीको तापक्रम केही खास तापक्रममा बढ्दो हुँदा, इन्जिन फेरि ज्वाला बन्द भएपछि फेरि सुरु हुँदैन। फेरि सुरु गर्नु अघि इन्जिन शान्त नभएसम्म तपाईंले कुर्नु पर्छ।
धेरै पुरानो मेशिनहरूसँग यस्तै हुन्छ, प्राय: कमजोर डिजेल गुणस्तर र डिजल पम्पमा क्षतिहरूको कारण।
यस अवस्थामा, तेल पम्प क्यालिब्रेट गर्न आवश्यक छ, र तेल पम्पको काम पेशेवरहरूले पूरा गर्नु आवश्यक छ।
माथिका पोइन्टहरू सामान्यतया ट्रबलशुटिंगका लागि उपलब्ध छन्, अधिक खुदाई अपरेटरहरूलाई मद्दतको आशामा।